Filipina: Mipoaka ny hetsipanoherana, Mitarika kosa amin’ny fanisàna vatom-pifidianana izay ho filohampirenena ny zanak’ilay mpanao jadona tany aloha · Global Voices teny Malagasy
Mitarika i Marcos, saingy mampisalasla ny fahamarinan'ny voka-pifidianana
Voadika ny 12 Mey 2022 7:59 GMT
Mpanao hetsipanoherana manandratra takelaka miampanga ny hosoka tamin'ny fifidianana tao Filipina. (‘Comelec palpak’ midika hoe “Tsy mamely ny Comelec). Sary avy amina famoahana iray tao amin'ny Twitter an'i Altermidya, fampiasàna nahazoana alàlana.
Mety handresy amin'ny fifidianana izay ho filohampirenena ao Filipina ilay loholona fahiny, Ferdinand Marcos Jr., raha ny fanisàna tsy mbola ôfisialy avy amin'ny Kaomisiôna misahana ny Fifidianana (Comelec). Na izany aza, raha toa miharihary ny fandreseny, nipoaka nanerana ny firenena ireo hetsipanoherana, andro iray monja taorian'ny 9 May nanaovana ny fifidianana, nahitàna ireo mpanao fihetsiketsehana nandà an'i Marcos sy ireo mpiara-mihazakazaka aminy, ny Ben'ny Tanàna ao Davao, Sara Duterte.
Marcos dia zanakalahin'ilay mpanao jadona efa nodimandry, Ferdinand Marcos, izay nitondra ny firenena nanomboka tamin'ny 1965 mandra-panaisotra azy teo amin'ny fitondrana tamin'ny 1986. Nampangaina ho nanodinkodina volabe an-tapitrisa dolara ny fianakaviana Marcos, harena sy loharanon-karena, fony mbola teo amin'ny fahefana. Nandritra izany fotoana izany, ny Ben'ny Tanàna dia Duterte, zanakavavin'i Rodrigo Duterte, filoha vao avy nandao ny toerany.
Ny fifidianana natao tamin'ny 9 May dia nofaritan'ireo manampahefana ho toy ny vita am-pilaminana sy azo antoka na eo aza ireo tatitra milaza tsy fetezan-javatra nanamatroka ny dingam-pifidianana tany amin'ny faritra marobe. Ny mpanaramaso ny fifidianana, Kontra Daya, dia nitatitra tarehimarika maro momba ny fahasimbana milina fifidianana marobe nandritra ny andron'ny fifidianana:
Tànan'ny Kontra Daya fa betsaka ireo tatitra voaray tamin'ity taona ity izay manaporofo fotsiny ny tsy fahombiazan'ny rafitra fiidianana nampiasàna milina mandeha ho azy, ho fiarovana ny endrika maha-zavamasina ny latsabato.
Sarotra ho an'ireo mpifidy ny hanana fitokiana amin'ireo dingam-pifidianana feno tsy fanarahan-dalàna sy fahasimbana milina, satria mampisalasala azy ireny ny hahafahan'ny milina manisa ny vaton-dry zareo.
Voamarika fa marobe ireo milina (milina mpanisa vato na VCM) no tsy niasa araka ny tokony ho izy tamin'ity taona ity raha ampitahaina amin'ireo fifidianana teo aloha:
TATITRA: Ratsy be noho ny tany aloha ny fahasimban'ireo VCM tamin'ity 2022 ityhttps://t.co/46pJMQvNb9#ExtendVotingHoursPH #KontraDaya pic.twitter.com/jZ3baauVwX
— Kontra Daya (@kontradaya)
Ny mpitarika ny fanoherana no sady Filoha-Lefitra, Leni Robredo, izay laharana faharoa aorian'i Marcos amin'ny hazakazaka ho filohampirenena, dia naneho ny ahiahiny momba ireo tsy fetezan-javatra notaterina. Nomeny toky ireo mpanaraka azy fa efa mijery ireny trangana tsy fetezana tamin'ny fampitàna voka-pifidianana sy fanisàna vato ireny izy sy ny ekipany;.
Fony nasehon'ny vokatra vonjimaikan'ny Comelec hoe mitarika amin'ny latsabato i Marcos sy Dutertre, nikarakara hetsipanoherana ireo mpanohana an'i Robredo, nanontany momba ny valimpidifianana sy niampanga ireo tomponandraikitra misahana ny fifidianana ho tsy mahay mitantana, araka ny asehon'ny fahamaroan'ny isan'ireo tsy fetezan-javatra mifandraika amin'ny fifidianana.
Hita tanatin'ireo mpanao hetsipanoherana ihany koa ireo mpikatroka zokiolona sy ireo mpiaro zon'olombelona izay tonga maro nanohitra ny firotsahan'i Marcos sy Duterte. Nambaran’ny vondrona Karapatan, mpiaro zon'olombelona, fa nampiasa harena halatra i Marcos mba hiverenana eo amin'ny fitondràna, no sady miketrika ny hanadio ny fahotàna vitan'ny fianakaviana mpanao jadona nipoirany:
Tsy hoe nandà fotsiny ny hiaiky imasombahoaka i Marcos momba ireo heloka bevava vitan-drainy sy ny anjara toerana notanan'ny fianakaviany tamin'ny naha-mpisitraka nivantana ireny heloka bevava ireny and-ry zareo: nodioviny, nambarany ho rariny mihitsy aza, ireo habibiana vokatry ny jadona nataon'ny rainy. Nolavin'ny fianakaviany ny hamerina ireo vola sy fananam-bahoaka norobain-dry zareo ho an'ny tombontsoany manokana nandritra ny fitondrana jadona nataon'ny rainy.
Nolazain'ny Karapatan sy ireo mpikatroka hafa fa nahodinkodin'ny ankolafy Marcos ny safidim-bahoaka, tamin'ny alàlan'ny fanelezana vaovao diso momba ireo lova navelany sy ireo hetsika nataon'ilay mpanao jadona efa nodimandry. Notsinian-dry zareo ihany koa ireo governemanta teo aloha ho tsy nahavita nitazona ny fianakaviana Marcos ho tomponandraikitra tamin'ny anjara noraisin-dry zareo nandritra ireo taona maro nahatonga ny Lalàna Miaramila hitondra ho amin'ny fanitsakitsahana faobe ny zo maha-olona tao Filipina.
Ny 10 May, nisy hetsipanoherana marobe anoherana an'i Marcos nokarakaraina nanerana ny firenena, tanora no tena nitarika azy ireny. Ny sasany tamin'ireny hetsipanoherana ireny dia nitranga tany amin'ireo faritany toa an'i Cebu, Isabela (Luzon Avaratra), Zamboanga (Nosy Mindanao), Nueva Ecija, Davao City (tanana nahaterahan'i Duterte), ary Naga City (tanàna nahaterahan'i Robredo).
Tao Manila renivohitra, anjatony maro ireo mpanao hetsipanoherana nifamory teo anoloan'ny biraon'ny Comelec hiampanga ny lazaina fa halabato voarindra tao anatin'ireo fifidianana vao haingana. Troy Matavia, sambany vao nifidy, no nitafàn'ny tranonkalam-baovao Bulatlat momba ny antony nanatevenany laharana ilay hetsipanoherana:
Mila maneho ny fihetsehampoko aho ka dia sambany nanatevina laharana ilay hetsipanoherana. Toa tsapako fa mila manao zavatra aho ary maika be ho an'ny vahoaka filipiàna ny miseho sy mijoro ho an'ny zon-dry zareo.
Taorian'ilay hetsipanoherana teo anoloan'ny biraon'ny Comelec, nanao diabe tao anatin'ny kianjan'ny fahalalahana, tsy lavitra teo, ireo andian'olona, ka tao ry zareo no nanohy ny fandaharam-potoanany mandà ny famerenana an-dry Marcoses sy ny forongony.
AMIN'IZAO FOTOANA IZAO: Mizotra ho ao Liwasang Bonifacio ireo mpanao hetsipanoherana, taorian'ny fandaharam-potoana teo anoloan'ny COMELEC. Azo jerena ao anaty lahatsary ny habetsahan'ireo mpanao fihetsiketsehana.#Halalan2022 #VoteReportPH pic.twitter.com/3nqmUsHqtH
— AlterMidya (@altermidya)
Hanisa amin'ny fomba ôfisialy ny voka-pifidianana izay ho filohampirenena sy ho filoha lefitra ny Kaongresy Filipiàna, ary ny 27 May no hamoaka ny anaran'ireo mpandresy.